ट्याक्सीमान्डुले संचालनमा ल्यायो निःशुल्क शौचालाय
२०७९ जेठ २२ आइतवार
ट्याक्सी सेवा प्रदायक स्टार्टअप कम्पनी ट्याक्सीमान्डुले काठमाडौंमा निःशुल्क शौचालाय संचालनमा ल्याएको छ । राजधानीको गोपीकृष्णमा रहेको कर्पोरेट अफिसको दुईवटा शौचालयलाई सार्वजनिक प्रायोजनका संचालनमा ल्याइएको ट्याक्सीमान्डुले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरको आह्वानलाई सहयोग पुर्याउने उदेश्यले शौचालय संचलनमा ल्याइएको ट्याक्सीमान्डुका सञ्चालक अर्जुन...
चितवन रत्ननगर नगरपालिकामा मतगणना सुरु
२०७९ वैशाख ३१ शनिवार
रत्ननगर नगरपालिकामा मतगणना सुरु भएको छ । रत्ननगर नगरपालिकाको कार्यालयमा शनिबार विहान १० बजेदेखि मतगणना सुरु भएको हो । गणना वडा नम्बर १ बार सुरु गरिएको निर्वाचन अधिकृत बिनोदकुमार गौतमले जानकारी दिए । मेयरमा नेकपा एमालेबाट विमलादेवी दवाडी, नेपाली कांग्रेसबाट...
काठमाडौँको दक्षिणी भेगको रक्षकः जलविनायक गणेश
२०७८ चैत ८ मंगलवार
काठमाडौँको दक्षिण साइडमा रहेको छ जल विनायक मन्दिर । काठमाडौका चार प्रशिद्ध विनायकमध्येको एक हो जल विनायक । जलविनायक कीर्तिपुर नगरपालिकाको चोभार गल्छी छेउँमा रहेको छ । यहाँसम्म पुग्नलाई निजी सवारी नहुनेले दक्षिणकाली जाने गाडीहरुबाट पनि पुग्न सक्छन् । धार्मिकरुपमा...
बलात्कार आरोपी सांसद बानियाँ निलम्बित
२०७८ फागुन २२ आइतवार
जबरजस्ती करणी मुद्दामा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानियाँ पदबाट निलम्बनमा परेका छन् । बानियाँ पक्राउ परेको विषय सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रनिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २ सय ४४ को उपनियम ३ अनुसार संसदलाई जानकारी गराएका छन् ।...
कति कमाउछन् नेपाली युट्युवरहरु ? कसको कति आम्दानी ?
२०७७ वैशाख २० शनिवार
सुरज खड्का पछिल्लो आधा दशकदेखि नेपालमा युट्युवको क्रेज थामिनसक्नु भएको छ । युट्युवमा विभिन्न विषयका भिडियो बनाएर अपलोड गर्नेहरु छ्यापछ्याप्ती छन् आजभोली । युट्युवमा भिडियो हालेर लोभलाग्दो ख्यातीसँगै आम्दानीमा पनि मालामाल छन् युट्युवरहरु यतिबेला । युट्युवबाट आम्दानी राम्रै हुन थालेपछि...